Ku. Dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed.
Ku: Dhamaan dadweynaha Soomaalida Ogaadeenya. 23/11/05
Ku: Jaaliyaadka Soomaliida Ogaadeenya ee ka jira wadamada dibada.
Ku: Dadweynaha u dhashay Gobalka Qoraxey.
Ujeedo: Codsi Gargaar dadweynaha Tuulada Fooljeex ee Degmada Q/dahare.
Walaalayaal iyadoo ay shan maalmood oo kaliya ka soo wareegtay Xasuuqii ka dhacay Magaalada Q/dahare. ayaa sidaad ka war haysaan waxaa 20kii bishan Ciidamada Gumaysiga Itoobiya gubeen dhamaan Guryihii iyo Hantidii taalay Tuulada fooljeex oo ka tirsan Degmada Q/dahare ee Gobolka Qoraxey dadkaas Shacabka ah oo ayna jirin waxay ku galabsadeen Ciqaabtaas, ayaa waxay maanta La'a yihiin meel ay ka galaan Dhaxanta, Qoraxda, Roobka IWM. waadna Garankartaan Murugada haysata maanta ninka leh 10 Caruur ah iyo Hooyadood oo uusan Hu, Hoyi iyo cunto midnaba u heynin.
Walaalayaal markay dhacaan Masiibooyinkan oo kale waxaad aragtaan Darisyadiina oo ka kooban dadyowga dunida oo Gaal iyo islaamba leh siday oogu gurmanayaan kuwa masiibooyinku haleelleen. ayagoo eegaya Bini-aadamnimada oo kaliya. xusuunana in Masuubadu kolba qaar haleesho Bini-aadamka. Hadaba hadii dadku Bini-aadamnimo darteed sidaas isugu caawiyo. waxaa waaajib inagu ah Maanta inaan walaalaheen oo aan Dhiig, Dhalasho, Dhaqan iyo Dhulba wadaagno Caawino ku waa soo Cadow ka taagroon oo aan u naxaynin ka gubay Hooy iyo Hanti waxay la haayeenba.
Walaalayaal waxaan dhamaan inta warqadani ku socoto si naxariis leh ooga codsanayaa inay u istaagaan Caawinta walaalahooda dhibaataysan, isla markaana ay galaan abuul iyo dhaqaale u ruurin Lagu taageero dadka reer Fooljeex ee Gumaysigu Naafeeyey.
waxaan si gaar ah ooga codsanayaa dhamaan dadweynaha Gobalka qoraxey ee dibadaha jooga inay Taageero u raadinta dadka Wallalahood ah Bud dhige u noqdaan oo ay u istaagaan howshaas.
Cabdiwali Xuseen Gaas
gudoomiye ku xigeenka
Garabka Badbaadinta Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya
Faafin: SomaliTalk.com | Nov 23, 2005